Thu, Aug 16, 2018 | 00:45:57 NST
14:58 PM (6months ago )
-अस्ति भर्खरै सुजन भाइको जन्त जाँदा १० कक्षा पढ्ने भान्जाले उभन्दा अलि सानी केटी देखाएर सोध्यो – मामा त्यो केटी कस्ती छ ? मैले स्वभाविक जवाफ दिएँ – राम्री छ, किन र भान्जा ? भान्जाले नलजाइकन भन्यो–हाम्रो भर्खरै कुरो भयो, उसले फेसबुक आइडी दिएकी छ, काठमाडौं गएर भेट्ने सल्लाह भएको छ ।भान्जाको जवाफ सुनेर म ट्वाँ परें । उ मस्कँदै हिँड्यो ।
आफ्नो लभ कसरी पर्यो र कसरी सकियो भन्ने राम्रोसँग भेउ पाउन सकेको छैन । जुंगाको रेखी बसिनसकेको भान्जोले लभ गर्न थालिसक्यो । लभ मात्रै हो र ! डेट पनि भेट पनि । अझ हाम्रो लभ परेको छ, उ मेरो लभर भनेर चिनाउने दिन समेत आइसक्यो ।
अनि सप्ताह पुराण लगाएजस्तो भ्यालेन्टाइन सप्ताह रे । पहिलो दिन रोज डे । रोज डेको अर्थ तिनै भान्जाले भनेर जानेको । एउटा मात्रै गुलाबको फूलको अर्थ धन्यवाद, अनि रातो गुलाबको मुठै दियो भने म तिमीबिना बाँच्न सक्दिन हुन्छ रे ।
दोस्रो दिन पर्पोज डे । अर्थात मनमा उकुसमुकुस भएर गुम्सिरहेको भावनालाई प्रियसीसामु प्रस्ताव गर्ने दिन । तेस्रो दिन चकलेट डे, प्रियसीलाई चकलेट र कार्ड बाँड्ने दिन । चौथो दिन टेड्डी डे, ओछ्यानमा सजाउने नरम खेलौना उपहार दिने दिन ।
अनि प्रोमिस डे, हग डे, किस डे, त्यसपछि भ्यालेन्टाइन डे । भ्यालेन्टाइनमै कुरो मिल्यो भने अर्को वर्षसम्म भन्टयाङभुन्टुङ डे, कुरो मिलेन भने उतिखेरै भाँडभैलो डे ।
गाउँमा सप्ताह पुराण सकिएलगत्तै यस्तै यस्तै डे मिसिएको भ्यालेन्टाइन सप्ताह सुरु भएको रैछ । तपाईंहामी कपाल फुलिसकेका र फुल्न बाँकी भएकाहरुलाई थाहा नभएर भयो, स्कुल र कलेजका केटाकेटीले मनाउन थालिसकेको उत्सव ।
उबेला हाम्रो जमाना अर्कै थियो । कक्षाभित्र केटाकेटी एउटै बेन्चमा बस्न पाईंदैनथियो । केटाका लागि छुट्टै बेन्च । केटीका लागि छुट्टै बेन्च । कहिलेकाहीँ छुस्स छोइहाल्यो भनेपनि झस्कनुपर्ने । हात मिलाउन त के छुन समेत पाईंदैनथियो । स्वास्थ्य पढाउने सरले प्रजनन स्वास्थ्यको कुरा पढाउँदैनथिए । घरमा आफैं पढ्नु भन्थे । केटाले केटीलाई र केटीले केटालाई हेर्न समेत पाईंदैन थियो । गोठालो जाँदा मन परेको छिमेकीसँग यसो कुरा गरेको वल्लोघरे पल्लो घरेले देखे भने पनि पँधेरोमा कुरा काट्ने मसला बनाउँथे ।
पहिले पहिले गाउँमा मेलापात, जात्रामात्रा, गोठालो जाँदा लभ पर्दथ्यो । छिमेकका सँगसँगै गोठालो जाँदा कहिले यसको बाख्रा हराउँथ्यो, कहिले उसको गाई हराउँथ्यो । हराएका गाईबाख्रा खोज्न सहयोग गर्नुपर्दथ्यो । तल्लो घरकी च्यान्टी वनमा घाँस काट्न जाँदा रुख चढ्न सक्दिन थिई । माथ्लाघरे प्यान्टेले घाँस झारिदिन्थ्यो । घाँसदाउरा, गाईगोठालो र वनपाखा जाँदाजाँदै प्यान्टे र च्यान्टीको माया पिरिम झाँगियो ।
स्कूलमा राम र सीता एउटै कक्षामा पढ्थे । रामलाई सीता मन पर्ने, सीता वास्ता नगर्ने । एकदिन अर्धवार्षिक परीक्षामा जाँच दिंदादिंदै सीताको डटपेनमा मसी सकियो । रामले काम दिन्छ भनेर एउटा छुट्टै डटपेन बोकिरहन्थ्यो । त्यो दिन सीतालाई आपद पर्यो भन्ने उसले थाहा पायो । हत्तपत्त डटपेन दियो । अरुलाई चाहिएको भए किन दिन्थ्यो र ? आपदमा सहयोग गरेको मान्छे, त्यसपछि सीताले रामलाई मन पराउन थाली दुवैको लभ पर्यो ।
लभ पर्न केही न केही त जुर्नुपर्यो । कि मन मिल्नुपर्यो । दुवैले दुवैलाई मन पराउनुपर्यो । तर दुवैलाई दुवैलाई मन पराउने दोहोरो भन्दा एकोहोरो लभ धेरै हुन्छ । आफूलाई उ मन परेको हुन्छ । तर उसले बालमतलव दिने होइन । उसलाई पट्याउन, उनलाई फकाउन मरिहत्ते गरेर लाग्यो । कहिले बाटोमा कुरेर बस्यो । कहिले पँधेरामा सँगै गयो । कहिले किताब माग्यो, कहिले नोट माग्यो । कहिले कलम दियो, कहिले कलम माग्यो । कहिले खाजा दियो, तैपनि बालमतलव दिने होइन । तर कसरी कसरी कोहीसँग लभ चाहिँ परिहाल्छ ।
लभ पर्दैन भन्दा पनि कहिलेकाहीँ लभ पर्छ । कहिले चाहिँ लभ परोस् भनेर अनेका जुक्ति लगायो तैपनि पर्दैनथियो ।
तर अहिले कोर्सबुकको सट्टा फेसबुकमा भुल्ने बानी भएपछि लभ पर्न सजिलो भएको छ । आफ्नो फेस जस्तो भए पनि फेसबुकमा देख्दै लोभलाग्दो फेस भएको तस्बिर राख्न पाइन्छ । अनि सानादेखि ठूलासम्म सबैजना फेसबुकमा झुण्डिएपछि लोभलाग्दा फेसले लोभ्याउँछ । अनि फेसबुकमै भेट हुन्छ । फेसबुकमै डेट हुन्छ । फेसबुकमै लभ पर्छ ।
बिहे नभएकाले त लभ गरे गरे । तर बिहे गरेका, घरभरी छोराछोरी भएकाहरु समेत लभ गरि हिँड्छन् । श्रीमानको आँखाकान छलेर श्रीमतीले, श्रीमतीको आँखाकान छलेर श्रीमानले लभ गरेर हिँडेको तपाईं हामीले धेरै ठाउँमा देखेभोगेकै हो क्यारे । कथमकदाचित थाहा भै हाल्यो भने संग्राम हुन्छ । आफ्नो हुँदा चाहिँ टेन्सन नहुने । तर श्रीमानको या श्रीमतीको पनि अर्को या अर्की छ भन्ने थाहा हुँदा चाहिँ तनाव हुने ।
के केटाकेटी, के बुढाबुढी, के विवाहित, के अविवाहित जसले पनि लभ गर्ने, लभ गर्न खोज्ने, लभ पर्ने । काठमाण्डूमा त अझ लभ गर्ने ठाउँ लभ स्पटको समेत अभाव छ । मन्दिरमा जाऔं भने त्यहीँ मन्दिरको झ्यालढोका र दलिनमा देवीदेवताका भयंकर लभ देखिन्छ । उनीहरुको डिप लभलाई के डिस्टर्ब गर्ने ।
अन्त जाउँ ठामै छैन । एकपटक केशव स्थापितले लभ पोइन्ट बनाउँछु भन्थे । विचरा उनी आफैं विस्थापित भए । तर स्थापित फेरि स्थापित हुने ठाउँमा पुगेका छन् । प्रदेश तीनको भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बनेका स्थापितले ठाउँमा लभ गर्नेहरुको पिरमर्का बुझ्ने काम गरिदिए फलिफाप हुन्थ्यो कि ।